musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Scotland Mhepo Traffic Kudzora Towers Kudzima: Hapana Chirongwa B
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Scotland Mhepo Traffic Kudzora
Nharaunda dzekumaruwa muHighlands neZvitsuwa hadzina sarudzo yechipiri kana chirongwa B chezvekurapa uye zvekukurumidzira izvo zvino zvinowira pasi peimwe yeScotland Air Traffic Kudzora shongwe kuHighlands neI Islands Airports Limited (HIAL) nhandare dzinofanirwa kumiswa .
European Transport Workers 'Federation (ETF) iri kuda kuti masevhisi eATC ave nechokwadi mudunhu pasina kuregedza.
ETF inosimbisa iyo - inopesana nezvingaite senge mamiriro akafanana muLondon - mazhinji enhandare dzeHIAL dzinoda mukana wekubhururuka nendege kune zvekurapa zuva nezuva.
Pamusoro pezvo, idzi nhandare dzinoshandiswa kune mamwe marudzi ema emergency services.
Iyo ETF inotsoropodza zvakasimba zvinangwa zvichangoburwa zvekambani HIAL - inoshandisa nhandare gumi neimwe muScotland Highlands, Northern Isles, neWestern Isles - yekudzora huwandu hwazvino hwe kudzora kwemhepo masevhisi nhandare nhanhatu muHighlands neZviwi uye nekuvadzosera kure kure.
Mutsamba yakanyorerwa Gurukota rezvekutakura muScotland, VaGraeme Dey MSP, ETF, vakaratidza kuti danho rakadai raizokanganisa nharaunda dzekumaruwa munzvimbo yekuchamhembe kwakadziva kumadokero kweScotland, kwete chete nekurasikirwa nemabasa ane hunyanzvi, asiwo nekurasikirwa nemabasa akakosha - se nendege dzekurapa - nekuda kwekukanganisa kweiyo kure shongwe tekinoroji.
ETF inofunga kuti Hurumende yeScotland inofanirwa kukanda mapfumo pasi pakuita sarudzo iyi uye iri kukumbira Gurukota rezvekutakura reScotland kuti vatarise pamusoro pemutengo wekubatsira uye huwandu hwebatsiro hweHIAL uye vatarise zvakanyanya pamhedzisiro yakaipa yenguva refu yesarudzo yakadaro kune vagari vayo. , vashandi, uye nzanga yakakura muHighlands neZviwi.
Gwaro rinosimbisa izvo zviremera kubva Edinburgh haufanire kukanganwa kunyangwe kwechipiri kuti kuchengetedzeka nekusimudzirwa kwehupfumi enharaunda idzi zvinofanirwa kuuya pekutanga, kunyanya nekuti vanovimba nendege kuti vave nechokwadi chekuita mabasa, yakanyorerwa mutsamba ETF yakatumirwa kuna Gurukota rezvekutakura muScotland.
Secretary General we ETF, Livia Spera, uyo akasaina tsamba yakanyorerwa kuzviremera zveScotland, akasimbisa kuti pasina kuve nekuongorora kwakajeka kwemagariro nehupfumi hwechisarudzo chakadai, kubvisa izvozvi mabasa emunhu kuchakanganisa zvikuru raramo nharaunda idzi kuNorth West yeScotland, sezvo nhandare dzinoita basa rakakosha pakuvapo kwavo.